Hagaha Socdaalka Hurghada Xalaal - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Dalxiiska Hilton Hurghada
Hotelka Hurghada Hilton Plaza
Iberotel Hotel Makadi Beach Hurghada
Naadiga Iberotel Makadi Oasis Club Hurghada
Dalxiis Marriott Beach Hurghada
Sol Y Mar Naadiga Makadi Hotel Hurghada
Sol Y Mar Maroodi Suits Hurghada
Sol Y Mar Paradise Paradise Safaga
Sonesta Fircoon Beach Resort Hurghada
Saddex geesood Rihanna Inn Hurghada
Saddex geesood Rihanna Resort Hurghada
Boqortooyada Triton Inn Hurghada
Hurghada (Carabi: الغردقة el-ğarda'a) waa magaalo dalxiis oo ku taal Xeebta Badda Cas Masar.
Hurghada waxay mar ahaan jirtay tuulo kalluumeysi aad u yar oo aan cago badan ku taagnayn, kuna xigta Badda Cas. Waxay leedahay dhowr xeeb oo heer sare ah. Maanta, meesha loo tamashle tago ee Hurghada ayaa ah mid aan laga aqoonsan karin nolosheedii hore waxayna noqotay meel dalxiis loo tago Masar loogu talagalay dalxiisayaasha miisaaniyadda gaar ahaan Yurub iyo Ruushka. Waxay leedahay in ka badan 100 hudheelo, qaar badan oo ka mid ah ayaa ku teedsan xeebta, iyo duulimaadyo badan oo ka yimaada iyo garoomo diyaaradeed oo yaryar laakiin raqiis ah oo ku yaal Yurub.
Waxay caan ku tahay fursadaheeda quusidda, Hurghada waxay si gaar ah u codsaneysaa kuwa khibrada yar u leh quusitaanka qubeyska, kuwaas oo u yimid inay la yaabeen biyaha hoostooda iyo nolosha badda ee aadka u liidata. Dalxiiska ayaa hadda ah qeyb weyn oo ka mid ah Hurghada, sanad walbana, dad badan oo soo booqda waxay doortaan inay ku soo daraan ciiddooda halkan booqashooyinka ay ku tagayaan meelaha kale ee caanka ah ee ku teedsan Dooxada Niil, oo ay ku jirto magaalada u dhow Luxor.
Cimilada ayaa ah mid aad u qalalan roobkuna aad ayuu u yar yahay. Cimiladu waa mid aad u kulul maalmaha xagaaga aadna u kulul xagaaga xagaaga. Xilliga jiilaalka cimiladu guud ahaan way kulushahay maalintii laakiin waa qabow habeenkii. Hurghada waxay noqon kartaa mid aad u qabow marka dabaysha Shamal ay ka soo dhacdo waqooyi-bari.
Hurghada macnaheedu waa heerkulka baddaJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
Meelaha iyo maylalka iyo maylalka maylalka ah ee la taaban karo, inbadan oo ka mid ah waxay ka tageen horumarintii, waxay xallisay xeebta. Qaybta ugu da'da weyn, qaybta ugu badan ee Masaarida magaalada waa Ad-Dahar waqooyiga, oo leh xaddidan xarumo dalxiis. Tan waxaa lagu kala saaraa cirif yar oo boodh ah oo ka sigaar 4 km koonfur. Sigala waa marinka ugu muhiimsan ee magaalada, oo leh makhaayadaha galbeedka iyo kuwa dhaqameed, hudheelo iyo adeegyo guud, waxayna leedahay guuxa ugu badan ee ku saabsan. Dhowr doonyood iyo shaqaalayaal quusitaan ayaa ka socda marinada halkan. Jiidka ugu weyn ee Wadada Sheraton wuxuu kusii socdaa koonfurta dhanka xeebta ilaa 4 km ilaa Hotelka la diidan yahay ee Sheraton, oo ah wareeg sanadeed 1970s ah. Wadadu hadda waxay galeysaa aaladda Village Resort, oo leh finan kale oo hudheelo ah.
Xeebaha maraakiibta ee ku xeeran Hurghada ayaa dhowr mayl ka baxsan xeebta, oo ka duwan meelaha loo dalxiis tago ee Sinai iyo Urdun halkaasoo ay xeebta isku xidhaan, sidaa darteed noocyada kala geddisan iyo kuwa snorkelers waxay u baahan doonaan inay safar doon ah ku raaxaystaan. Jasiiradaha oomanaha ah ayaa badda ku jira Midda ugu weyni waa Big Giftun, oo leh naadi xeebeed iyo (si ka sii fiican) telecoms gudbinta wiishka - sidaa darteed soo dhaweynta moobiilku way ku wanaagsan tahay biyaha, iyadoo ay ka faa'iideysanayaan kuwa ka qeybgalaya ciyaarta iyo kuwa ciyaarta.
Soosaarayaasha casriga ahi waxay quus ka istaageen Hurghada, waxayna ka dhisteen goobo dalxiis oo dhalaalaya meelo ka fog fog, gaar ahaan El Gouna 20 km woqooyi, iyo Safaga oo 50 km koonfurta ka xigta. Kuwani dhammaantood waxay u isticmaalaan garoonka diyaaradaha ee Hurghada halka ay ka soo galaan.
Hurghada waxay leedahay duulimaadyo caalami ah oo toos ah oo ka yimaada Yurub oo ay ku jiraan Ruushka iyo Istanbul, waddamada Khaliijka, iyo Bariga Fog, tusaale Bangkok. Intabadan safarradan waxay kujiraan safarro xirmo ah Masar - laakiin dhammaan maahan, maadaama howlwadeennada ay sidoo kale iibinayaan tikidhada duulimaadka kaliya, oo ah hab raqiis ah oo ku habboon in lagu galo. Duullimaadyada gudaha waxay had iyo jeer isku xiraan Hurghada iyo Qaahira, iyo maalin kasta Alexandria, Luxor iyo Aswan, iyo Sharm el-Sheikh. Kuwani waa hab wanaagsan oo loo safro maaddaama Hurghada ay taageerto cidlo aad u xun, iyo gaadiidka waddooyinka loo maro magaalooyinka kale waa mid dhaadheer, kulul, boodh leh, qulqulaya oo aan gebi ahaanba ammaan ahayn. Shirkadda ugu weyn ee waddanka ka shaqeysa waa Egyptptair, laakiin Nile Air iyo Al Masria ayaa ku tartamaya waddada Qaahira waxayna hoos u dhigayaan qiimaha tikidhada. Hawl wadeennada xirmada (tusaale ahaan TUI) sidoo kale waxay duulaan lugaha guryaha, laakiin kuwani waa inay macaamiishooda u wareejiyaan Masar lamana heli karo buug-tilmaam illaa dhibic.
Madaarka Caalamiga ah ee Hurghada. Duulimaadyada Egyptptair waxay adeegsadaan Terminal 2, qof kasta oo kale wuxuu isticmaalaa Terminal 1. Waa garoon diyaaradeed oo hagaagsan illaa ay wax ka qaldamaan - Masar waxay ku raaxeysataa cimilada duulimaadka ee wanaagsan, markaa dhibaatada caadiga ah waxay noqon doontaa cimilo xun Yurub oo dhan iyo duulimaadyo soo noqosho ah oo muddo dheer dib u dhacayay. Hoolka soo-galo ayaa markaa kadib noqon doona burbur xoog leh oo rakaab dibedda ah oo ku fadhiya boorsooyinkooda iyo musqulaha oo buux dhaafiyay. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Xirmooyinka imanaya dalxiisayaashu waxay lahaan doonaan bas u gaar ah oo ay sugayaan, qof kasta oo kale wuxuu u baahan doonaa taksi. Gegada diyaaraduhu waxay qiyaastii 8 km galbeed kaga toosan tahay aagga loo dalxiis tago oo 10 km ayey u jirtaa magaalada hoose ee Sigala, laakiin qiimayaasha masaafadan aad ayey u sarreeyaan. Waxaad si fudud ku bixin kartaa LE200. Careem ilaa Soma Bay waa LE220 (Oktoobar 2018). Qiimaha joogtada ah ee garoonka diyaaradaha ayaa aad uga jaban. Wadayaashu waxay LE35 ku siinayaan inay soo galaan oo ay ku sugaan garoonka diyaaradaha: dabiiciyan waxay raadiyaan inay tan ka soo ceshadaan socdaalka socdaalka iyo socdaalka. Haddii kale, u kac jidka weyn, oo qiyaastii 500 mitir ka baxa terminaalka, oo taksi halkaa ku qabso. Waxaa sidoo kale jira LE50 canshuuraha wadada weyn ee koonfurta ilaa Safaga (Oktoobar 2018) oo lagu daro taariikhaha.
Qaahira - Safarku badanaa wuxuu qaataa ugu yaraan 7 saac iyadoo kuxiran hawlwadeenka. Hawl wadeenada la yaqaan waxaa ka mid ah Super Jet (ph. 16108) iyo Go Bus (ph. 19567). Waxaa jira dhowr saldhig oo ay ku jiraan mid ka dambeeya xarunta tareenka Qaahira Axmed Helmy. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo qiimo ah oo ka bilaabmaya LE50 una kacaya LE150, saacad kasta waxaad ka heli kartaa bas u socda Hurghada (ka fogow MCV Co). Gudaha Medan El Giza waqooyiga-galbeed ee Qaahira inta badan aad ayey u badan yihiin, ama Saldhiga Almaza ee degmada Heliopolis ee waqooyi-bari Qaahira. Jadwalka basku badanaa wuu isbeddelaa, laakiin haddii aad tagto xarunta basaska adiga oo aan ballansan waxaad heli doontaa fursado badan. (February 2012).
Websaydhka GoBus wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iibsato tikidhada soo noqoshada dhammaan waddooyinka tooska ah ee taleefankaaga gacanta oo ah tigidh elektaroonig ah oo aad u habboon - waxaad u baahan tahay oo keliya inaad sameysatid koonto si aad tan u sameyso oo dalxiisayaasha ajnabiga ah waa lagu soo dhaweynayaa dhammaan adeegyada la siiyay haddii aadan ahayn ku safrida waddooyinka xaddidan. Inta udhaxeysa Qaahira, Luxor iyo Hurghada waa hagaagsan yihiin.
Alexandria - Waxaa jira 2 bas oo ka taga Alexandria ilaa Hurghada. Midka hore, Sare Masar Bus Co., wuxuu ka baxayaa 6:30 PM saldhigga basaska cusub, wuxuuna ku kacayaa LE90. Waxay timaaddaa Hurghada abbaaraha 4:30 AM. Laguguma talin maxaa yeelay waxaad magaalada oo dhan ka heli doontaa hurdo qoto dheer waxayna umuuqataa magaalo cirfiid. Baska labaad, Super Jet Co., wuxuu ka baxayaa xarunta basaska cusub 8:30 PM wuxuuna ku kacayaa LE95. Waxay timaaddaa subaxdii si aad u hesho gaadiidka dadweynaha iyo tagaasida. (Febraayo 2012)
Qena iyo Luxor - Qiyaastii 4-5 saac ayay bas ku raacayaan. Go Bus waxay leedahay laba bas oo maalinle ah 8:15 AM iyo 3:30 PM fiidnimo una socda Luxor oo ka timaadda LE90. Haddii aad ku fiirineyso barta GoBus aaladda mobilada, ma heli kartid liisaska Luxor-iskuday laptop ama muuqaalka desktop.
Upper Masar Bus Co. wuxuu maraa inta udhaxeysa Hurghada, Safagah, Luxor iyo Aswan.
Aswan - Waxaa jira hal shirkad gaadiid oo u socota Badda Cas, Sare Masar Bus Co. Basasku waa cusub yihiin, tikidhadu waa LE50 (laga yaabee inaad LE5 dheeraad ah ku bixiso ajnabi ahaan). Waxaa jira 2 bas: 3:30 PM iyo 5:30 PM. Safarku wuxuu qaadanayaa 8 saacadood ama ka badan, taas oo macnaheedu yahay waxaad imaan doontaa Hurghada saqda dhexe kadib. (Febraayo 2012)
Tagaasida "adeega" ee masaafada dheer waxay ka socdaan boosteejada basaska Hurghada ee wadada El Hegaz (oo aad ku gaari karto bas 4 ama 7, ama tagsi maxalli ah). Kuwani waxay ku socdaan dhammaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaal Masar, laakiin ka fiirso iyaga gaar ahaan orodka Luxor, halkaas oo waqtiga lagu badbaadiyey duulimaadku uusan qasab ahayn.
Markaad 2 ama 3 idinka mid ah, waxaad kala xaajoon kartaa taksi gaar ah oo masaafo dheer ah; markale, safarka Luxor sifiican ayuu ugu shaqeeyaa qaabkan. Oo uusan ka duwanayn "serves", darawalku wuxuu ku hakadsiin doonaa waxyaabaha qadiimiga ah iyo fursadaha sawir ee jidka.
Adeegyada doomaha ee u kala goosha Hurghada iyo Sharm el-Sheikh, ee gacanka Siinay, ayaa la joojiyay 2010, mana jiraan wax dib u bilaabasho ah oo la filayo.
Doon bisad-dhaqso ah ayaa mareysa inta udhaxeysa Safaga, 50 km koonfur ka xigta Hurghada, ilaa Diba (ama Duba) Saudi Arabia. Maaddaama wadadani ay qaadayaan dad badan oo xujey ah iyo gawaari xamuul ah, kuma dhicin magaalada dalxiis ee magaalada. Waxaad ubaahan doontaa inaad sifiican u kala soocdo fiisadaada Sacuudiga kahor.
By baska micro
Raxan basas yar yar (Toyota Hiace) loo yaqaan baska yar ugu adeegto aagga, iyada oo lagu raacayo qiimo jaban oo LE2 ah. Waxay maraan wadooyin go'an, inta badanna marinka xeebta, iyagoo qaadaya kana tagaya meel kasta oo jidka ah. Weydii meelaha aad ku socoto ka hor intaadan furin - haddii uusan ahayn baskaan, waxaa laga yaabaa inuu yahay kan xiga ee horay u soo kacayay. Way ciriiri yihiin oo ciriiri yihiin, haweenka da'da yarna waxaa laga yaabaa inay ka fogaadaan cayayaanka.
Basaska yar yar ee waaweyn ama basaska yaryar ee caadiga ah ayaa si isdaba joog ah u mara wadada weyn ee xeebta ilaa El Gouna iyo Safaga.
Wadayaasha tagaasida ee Hurghada waxay leeyihiin hibo layaab leh oo ay ku ogaanayaan dalxiisayaasha meel fog ka fog; fiiri gaariga ku soo dhowaanaya waana uu joogsan doonaa adiga - qiimo ahaan.
Kahor intaadan guda gelin, ogow haddii darawalku ku hadlayo wax Ingiriis ah, oo tus khariidada meesha aad rabto. Waxaa jira kaliya wadooyin yar oo leh magacyo, sidaa darteed halka loo socdo waxaa lagu qeexay meelaha u dhow, hudheel tusaale ahaan. Ka wada hadal oo isku raac qiimaha guud (qofkiiba maaha) oo uu la socdo darawalka: qiimaha waa inuu ahaadaa LE5-10 gudaha isla qeybta magaalada iyo LE20 marka loo socdo bartamaha magaalada Senzo, tusaale ahaan. Ha ku safrin mitirka, darawalka ayaa maamuli kara. Ka dib markii darawalku ku heshiiyo qiimaha, boodi. Ka soo bax huteelka hortiisa.
Si looga fogaado iska hor imaad darawallada hubi inaad haysato xaddiga saxda ah ee lacagta ee aad ku heshiisay markii hore, ku wareeji lacagta goobta aad ku socoto, ka bax oo ka tag.
Haddii aad ku bixiso LE5 ama LE50 qoraalada darawallada ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay u beddelaan warqad 50-piastre ah, ka dibna waxay codsanayaan qoraalka asalka ah ee aad horay u bixisay. Qoraalada Piastres ayaa ka yar rodol. Mararka qaarkood darawalku wuxuu ku raacaa qiimaha LE15, oo markaad timaaddo wuxuu kuu sheegayaa wuxuu yidhi LE50 oo lahjaddiisu way ka sii daraysaa.
Uber iyo Careem labaduba waxay xarumo ku leeyihiin Hurghada. Iyagu waa macquul qiimo jaban oo ku habboon, kaa ilaaliyaya halista aan kala go’a lahayn ee looga baahan yahay raacida tagaasida.
Si kastaba ha noqotee, meelaha qaar (tusaale ahaan istaanka basaska) ee ku yaal gudaha Hurghada ayaa “laga xiray” Uber. Waxaad arki doontaa farriin ah in Uber "aysan ka shaqeyn meeshan". Si fudud u soco qiyaastii 2-3 baloog / 5 daqiiqo oo ka fog dhismaha (iska ilaali touts taksi inta lagu jiro), waxaadna awoodi doontaa inaad markale isticmaasho Uber.
Hurghada malahan muuqaallo badan oo cajiib ah marka laga reebo Badda Cas. Si kastaba ha noqotee, maalin kasta hal ama labo maalmood safar ayaa laga heli karaa labada Luxor iyo Qaahira. Niilka ku yaal Luxor waa caan, sidoo kale Ahraamyada waaweyn iyo Sphinx-ka ku yaal Giza, Qaahira.
Hurghada waxay siisaa waxqabadyo badan oo aan laga helin meel kale oo Dunida ka mid ah. Hadaad ahaayeen inaad doorato inaad ku ekaato hudheelkaaga muddada nasashadaada, waxaad waayi doontaa wax ka badan intaad ku gorgortantay.
Sababta ugu weyn ee loo booqdo Hurghada waa Badda Cas, oo aad ugu fiican quusin ama snork. Sababtoo ah hoos u dhacii dhowaan ku yimid dalxiisayaasha imanaya Masar, waxaa loogu raaxeysan karaa qiimo jaban sida ugu dhow meelna adduunka oo dhan, marka laga reebo laga yaabee Koh Tao ee Thailand. Ka eeg hudheello aan caadi ahayn iyo boqolaal nooc oo kalluun kulayle ah oo 10 mitir u jira xeebta ama safarada doonyaha Ama hudheelkaagu wuxuu ku yeelan doonaa wehel ilaaliya goobta, ama waxay kuu diyaarin kartaa safar quus ah oo ay ku socdaan hageyaal. Noocyada kaladuwan ayaa ah kuwa maxalliga ah oo guud ahaan ku fiican wax ka qabashada bilowga. Uma baahnid inaad ogaato sida loo dabaasho si aad u quusto. Dabayaaqada Maarso, biyuhu waxay noqon karaan xoogaa qabow, markaa suud qoyan ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan tahay. Huteelada miisaaniyada badankood waxay leeyihiin safarro quusasho (2 quus joogto ah) € 20 oo la bixiyo, laakiin haddii aad joogto mid ka mid ah meelaha ugu fiican, waxaad ku dambayn doontaa bixinta illaa $ 65 doolar. Marka way fiicantahay inaad ka baxdo aagaaga raaxada (aka hotel) oo weydii qiimaha.
Ashraf Kala Duwan (Ashraf Asheaf),. Sayid lagu kalsoonaan karo, dabacsan oo saaxiibtinimo quusin ah. Quusitaankiisa waxaa ka mid ah wax walba; safar, doon, qalab, cunto, cabitaan. In kastoo, ha isku hallayn isaga inuu ballansado hoygaaga - akhri Masar # Cope. WhatsApp: eeg lambarka taleefanka. WeChat: ashraf quusto. Sidoo kale eeg: Ashraf Abat. Sida qaali u ah heshiisyada kale ee wanaagsan- $ 25 oo loogu talagalay 2 quusin (laga bilaabo Sebtember 2018), waxay kuxirantahay tirada dadka iyo xilliga. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Ku quus Badda Cas,. Waxay leeyihiin mid ka mid ah doomaha ugu wanaagsan dekedda. US $ 31 oo ah 2 quusitaan boggooda, laakiin waxaad heli kartaa qiimo dhimis haddii aad lugayso. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Doomaha ka gudba Badda Cas illaa jasiiradda aan la deggeneyn ee Giftun oo ay ku hareereysan yihiin jardiinooyin suuxsan oo dabiici ah. Ku raaxayso maalin caajis ah ciidda cad ama ku dhex dabaalan meekhaanta dhagaxyada. Safarkan maalinta weyn waa adag tahay in laga boodo marka aad ku sugan tahay Hurghada.
Quad-bikeing boqolaal mayl saxaraha Sahara shaah la qabiil Bedoin, ka dibna geel-fuushan guud ahaan bannaanka Baybalka si aad u aragto yaabab fog iyo kuwii hore. Dalxiis cidla ah, waxaad sidoo kale ku raaci kartaa mootooyinka ama bajaajyada xeebta cidlada.
Waxaad sidoo kale raaci kartaa doonta hoose ee dhalada ah oo aad ku arki karto dhagaxyada cajiibka ah iyo muuqaalka biyaha hoostooda.
Intaas waxaa sii dheer, dabbaasha badda diiran, dabeylaha dabaysha, shiraaca, jetski, dukaamaysiga wanaagsan, cunnooyinka aad u fiican oo kaladuwan ee adduunka, iwm.
Xeebta Waxa kale oo laga yaabaa inay dabayl dhacdo dabayaaqada Maarso (ama maahan). Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad hubiso haddii hudheelka hudheelkaaga xeebta ku yaal uu ku siinayo muraayado muraayado xeebta ku yaal.
Fiidkii, tamashle ayaad ugu aadi kartaa aagga socod socodka makhaayadaha dhaqanka qaarkood, dukaamaysiga, ama cuntada. Waxaa ku yaalo xarun Bowling iyo madadaalo qoys oo u dhow sidoo kale dhowr mall iyo maqaayado. Nolosha habeenku sida caadiga ah waxay bilaabataa goor dambe, waxaadna ka heli kartaa naadiyo qaarkood meel aad ugu dhow hareeraha socodka.
Xeebta Badda Cas oo dhan waxay leedahay shuruudo heer sare ah kitesurfing. Hurghada sidaas kama reeban. Halkan waxaad ka heli kartaa barxado fara badan oo leh iskuulaad-caajis iyo saldhigyo qaniinyo. Halkan qaar ka mid ah:
PlayKite. Waxay ku taalaa hareeraha xiga ee hudheelka Nubia. Goobtan qaniinyadu waxay leedahay boosas fara badan oo loogu talagalay bilowga iyo kuwa fuushanba
Kite4Fun. Waxay ku dhowdahay AMC Azur, huteellada Hawaii Le Jardin. Meeshani waxay leedahay haro gacmeedyo hoose oo leh biyo fidsan.
Dugsiga Sare ee 'Masters Surf'. Waxay ku taalaa Panorama Bungalows Aqua Park Hurghada hotel. Meel yar oo biyo-gacmeed ah, sidaa darteed waa goob ku habboon wadayaasha dhexdhexaadka ah
Iskuulka Eros. Waxay ku taal meel u dhow xarunta Play Kite. Waxa kale oo jira haro-gacmeed gacmeed oo heer kasta oo fuula uu fuuli karo.
Waxaad ka iibsan kartaa waxyaabo badan oo xusuus ah dukaamada ku faafay gudaha magaalada weyn (wadada dheer ee Sekalla) iyo hareeraha aagagga xeebta, sidoo kale magaaladii hore (el Dahar) waxaa ku yaal suuqyo badan oo xulasho leh oo ka qiimo jaban Sigala. Waxaa jira suuq ganacsi oo cusub oo hadda furan oo qiyaastii 10 daqiiqo ah oo taksi looga raaco magaalada, oo ku taal suuqa loo yaqaan 'Senzo Mall' dhanka wadada garoonka diyaaradaha. Waxay leedahay Spinneys Hypermarket weyn iyo dukaamo kale oo badan, goobo cuntada lagu iibiyo oo dhakhso ah iyo shaneemo shaashad leh oo 5-shaasha ah iyo waliba aag ay ku ciyaaraan caruur dhexdhexaad ah.
Xusuusnow inaad jabiso, jabiso oo aad jabiso meel kasta marka laga reebo maqaayadaha iyo farmasiyada. Waa inaad awoodaa inaad kahesho 75% qiimaha iibiyaha marka hore weydiiyo. Tani way ku kala duwanaan kartaa alaabooyin kala duwan, markaa xusuusnow inaad hubiso in yar oo dukaanno ah si aad u hesho qiimayaal sax ah. Waxaa jira dukaamo alaab xusuus leh oo qiimo go'an leh, inta badan aagga New Hurghada in kastoo kuwani laga yaabo inay ka sarreeyaan haddii aad ku dhex dhacdo daaqadaha. Dukaamada caanka ah ee "Cleopatra", ee ku yaal magaalada Hurghada ee magaalada Mamsha iyo wadada Sheraton, waxay leeyihiin waxyaabo badan oo xusuus ah sida shaatiyada, alwaaxa iyo qalinka.
Magacyada sumadaha iyo alaabada tayada sare leh, u tag 'New Marina' iyo wadada Sheraton ee Adidas, Timberland, Dockers iyo Levi. Dharka iibka ah ee suuqa caadiga ah (souq Carabiga) badanaa waa been abuur, in kasta oo boorarku muujinayaan magacyada caanka ah ee caanka ah.
Waxyaabaha ku saabsan dukaamada cadarka miligram ee LE1 oo macnaheedu yahay cadarka ugu fiican ee LE25 maxaa yeelay dhammaan cadarku waxay ku yaalaan saldhig saliid waana dhif inaad ka heli karto cadar dabiici ah ama asal ah. Ka taxaddar markay kugu jiidayaan gudaha, waxay kugu casuumayaan inaad wax cabto inta badan shaah. Haddii ay dareemaan inaad taajir tahay waxay iibsan doonaan koola, inta ay kula sheekaysanayaan oo ay kuu daayaan inaad urka xoogaa udgoon ah soo dirtid, waxaa lagugula talinayaa inaad diiddo maxaa yeelay haddii aad cabto waa inaad iibsataa.
Hurghada waxay bixisaa noocyo kala duwan oo cunno ah, oo ay ku jiraan cuntada degdegga ah, makhaayadaha reer galbeedka, cuntada bariga, iyo kuwo kale oo badan. KFC iyo McDonald's, iyo cuntada deg degga ah ee GAD, waa joogaan.
Goobta “Sherry St.” laamo ka socda Sheraton St. waxaad ka heli kartaa cunno digaag ah "Brost eldik" oo loogu talagalay LE14, oo caan ka ah dadka dabo-joogga ah iyo dhallinyarada.
Saxanka Oriental (dhanka waqooyi ee magaalada). Carabi, solay, shawarma, falafel. Waxay leedahay ismaris falafel macaan oo raqiis ah. Falafel sandwich LE2.50. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Magaalada Shiinaha ee ku taal bartamaha Sigala strip waxay noqon kartaa isbeddel soo dhaweyn ah.
Makhaayadda Al Mustafa. Cunnooyinka macaan, kalluunka noocyadiisa kala duwan, qiime jaban, soo dhaweynta martida. LE30-80. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Om Ammar,. Makhaayad yar oo wadada agteeda ah, oo fadhida sariirta, shaqaaluhu si adag uguma hadlaan Ingiriisiga, cuntooyin badan oo maxalli ah oo la heli karo oo ay ku jiraan BBQ, khibrad aad u heer sare ah iyo qiimayaal. LE20-60. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kuwa ku cusub Masar wuxuu heli doonaa karkaday (cabitaan laga sameeyay faleebo Hibiscus ah, waxaa loo adeegsaday kuleyl ama qabow waxaana loo aqoonsan yahay inuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo badan) iyo chi (nooca shaaha ee maxalliga ah, oo badanaa lagu bixiyo galaas) ayaa laga bixiyaa meel kasta. Labaduba waa macaan yihiin waxayna badanaa buuxsami doonaan qiiq on a sheesha biibiile, Galbeedka looga yaqaan hookah. Sheeshas waxaa loo isticmaalaa in lagu cabo tubaakada molaska noocyo kala duwan leh, iyadoo qiiqa uu dhexmaro biyaha kahor inta uusan neefsanin tuubo dheer oo baaquli kuxiran. In kasta oo ay u ekaan karaan aalad loo isticmaalo in lagu cabo walxaha sharci darrada ah ee galbeedka (a bong), sheesha waa sharci.
Halkee laga joogaa Hurghada
Wax yar oo raadinta internetka ayaa qaar iska tuuri doonta hoy gaar loo leeyahay Taasi badanaa waxaa iska leh reer Yurub oo ah guri fasax ah, oo siiya madax-bannaanid aad u badan marka la joogo hudheelka dalxiiska oo aad uga jaban. Huteelada miisaaniyada ee loogu tala galay Masaarida qolal leh LE50 waxaa laga heli karaa meel u dhow Sare Masar boosteejada basaska.
Hotel Golden Rose, Qesm Hurghada ,. Qiimo wanaagsan. Waxaa ku jira marin xeeb (200 m) - maahan wax weyn laakiin kuraas iyo tuwaallo lacag la’aan ah. Waxaa jira eey si joogto ah u cabaada oo la dagaallama eeyaha kale ama kuwa ag maraya ee kala duwan, xitaa habeenkii. Hal ka LE177. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Hoteelka Snafer (dhanka waqooyi ee magaalada),. Ku dhowaad xitaa ka fiican qiimaha Golden Rose laakiin aan lahayn marin xeebeed bilaash ah. Laakiin geesta gees waxaa ku yaal Xeebta Dalxiiska ee Badda, oo ku dallaca LE50 maalin dhan oo marin xeebeed ah. Si kastaba ha noqotee, waxay ku taal qaybta waqooyiga ee magaalada, halkaas oo aan wax badan ka dhicin sababtoo ah shaqo yarida meelaha dalxiis ee maxalliga ah. Hal ka LE100. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Dalxiiska Dalxiiska Sonesta Pharaoh, Wadada Safaga, Hurghada Egypt ,.
Sunrise Holidays Resort, Wadada Coronation, Hurghada Egypt. Dadka waaweyn oo kaliya (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Sunrise Crystal Bay Resort, Hurghada Masar.
Sea Star Beau Rivage, Hurghada Masar.
Giftun Azur Beach Resort, Hurghada Masar.
Dalxiiska Xeebta Marriott (dhanka koonfureed ee Sheraton la isticmaalay),. On Resort Resort. Xeeb yar laakiin tas-hiilaad isboorti oo wanaagsan, Aquarius Quusitaanka ayaa ku yaal halkan. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Oberoi Sahl Hasheesh (Sahl Hasheesh waa 15 km S oo ka tirsan bartamaha magaalada Hurghada),. Huteel u muuqaal eg mooor (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Kiliiniga Hurghada - Rug caafimaad oo leh dhakhaatiir ku hadli kara Ingiriisiga iyo Boolishka. Siyaasadaha caymiska safarka ee caalamiga ah waa la aqbalaa.
Isbitaalka El Gouna - Adeeg caafimaad oo xirfadle ah kana gudbaya Badda Cas. Waaxyo kala duwan oo ay la socdaan shaqaale ku hadli kara Ingiriisiga, Faransiiska Ruushka iyo Jarmalka. Caymiska caalamiga ah badanaa waa la aqbalaa. Tel. 0122 744 5700
Safaaradaha & Qunsuliyadaha ku yaal Hurghada
Italy, Mastaba Badda Cas - Hurgada,.
Nabdoonow oo iska ilaali khayaanada Hurghada
In 2018, waxaa jiray cabashooyinka martida oo ku xanuunsanaya hudheelka Steigenberger Aqua Magic sababo la xidhiidha arrimaha nabadgelyada cuntada ee suurtogalka ah, oo ay ku jiraan cuntada aan la karin iyo nadaafad darrada. Laba safar oo Ingiriis ah ayaa dhintay; BBC Cook ayaa ku warantay in wakaalada socdaalka Thomas Cook ay macaamiisheeda ka kaxeyneyso hoteelkaas mararka qaarna ay diyaarinayso sidii ay dalkooda ugu duuli lahayd.
Luxor - Meesha xigta ee muuqata oo caan ah. Waxaa lagu sameyn karaa safar maalinle ah, in kastoo taasi ay waxyar waalan tahay, iyo inbadan oo 20-saacadood ah. Weydii agagaarka hawl wadeenada sumcadda leh: dalxiis jaban ayaa ciriiri la gelinayaa, marka hore aad u qabow ka dibna aad ayuu ugu kulul yahay bas yar oo si xun u soo baxay, waxaadna arki doontaa wax yar oo ka mid ah Karnak iyo Dooxada Boqortooyada iyo in ka badan dukaanka darawalnimada adeerkiis. .
Aswan - Lagu gaadhay via Luxor laakiin dhib yar markaa waa. Toddobaadkiiba hal mar ayaa doonta laga raaca harada Nasser ilaa Wadi Halfa ee Suudaan, waa wadada keliya ee u dhexeysa labada dal.
eHalal Safarka Mart > Safarka Masar Xalaal > Hagaha Safarka Xalaasha ah
Tilmaamaha Safarka ee Stuttgart Xalaal